Farmaajo Oo Dalkii Uu Gummeysiga Geliyay Ku Tilmaamay Mid Uu Karaamadiisa ilaaliyay!
Sunday July 01, 2018 - 09:42:32 in Wararka by Super Admin
Munaasabado ay soo qaban qaabisay dowladda Federaalka oo lagu xusayo 58 guuradii kasoo wareegatay markii Soomaaliya xuriyadda ka qaadatay gummeystihii Talyaaniga ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho.
1,July,1960 ayay aheyd markii Soomaaliya ay noqotay dowlad madax banaan gummeystihii Talyaanigana uu bilaabay in uu dalka isaga baxo isagoo maamulka wadanka ku wareejiyay xukuumad Rayid ah oo uu madax ka ahaa Aadan Cabdulle Xasan oo Aadan Cadde ku magac dheeraa.
Hoggaamiyaal katirsan DF-ka ayaa khudbado ay ka jeediyeen munaasabadda Koowda Luuliyo waxay ku xayeysiiyeen siyaasadooda maamul iyagoo shacabka Soomaaliyeed u sheegayay in Soomaaliya tahay mid xur ah.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah hoggaamiyaha dowladda Federaalka ayaa sheegay in 58 sanadood kadib Soomaaliya ay leedahay dowlad wanaagsan isagoo umuuqday mid xayeysiinayo dowladdiisa oo dalka maxmiyad hor leh gelisay.
"Waxaa xusid mudan in maanta ummadda Soomaaliyeed ay yeesheen dawlad sharaftoodii iyo karaamadoodii soo celinaysa, dawlad ku hawlan hirgelinta iyo xoojinta ammaankii iyo nabaddii dadka Soomaaliyeed in badan ka maqnayd, dawlad caalamka aqoonsi iyo kalsooni buuxda ka haysata, lana hubo in ay buuxinayso kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd caalamka" ayuu yiri Farmaajo.
inkastoo Farmaajo ku faanay in dalka ay xuriyaddiisa ilaalinayaan hadane taasi caksigeed ayaa taal saaxada siyaasadda Soomaaliya oo dowladdiisa ayaa dalka gelisay gummeysi iyo tiih aan horay usoo marin shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Hadda jirta ee Farmaajo madaxda ka yahay waxay Itoobiya usaxiixday in ay qaadato Afar dekadood oo kuyaal dalka Soomaaliya halka ay sharci ka dhigtay joogitaanka ciidamada gumeysiga Jinsiyadaha kala duwan leh ee dalka duullaanka ku jooga.
Ehellada Gabadhii lagu dilay Gaalkacyo oo tilmaamay cida ay tuhmayaan (Dhagayso)